Home Wararka Fahad Yasin oo si farsameysan usoo afjaray awooda siyaasadeed RW Rooble
Imaatinka Fahad Yasin uu ku yimid magalaada Muqdisho waxa ay dhawaac siyaasadeed oo xoogan gaarsiisay Ra’iisal Wasaare Rooble iyo kooxaha taageersan. RW Rooble oo wacad ku maray in uu maxkamad soo saarayo Fahad Yasin, isla markaana isku dayay in uu horistaago safarkii Fahaf Yasin ayaa waxa gacantiisa ka sii baxay saameyntii uu ku lahaa siyaasadda Soomaaliya.
Fahad Yassin oo doonayo in uu tuso RW Rooble in uusan lahayn awood uu kula dagaalo qorshshiisa ayaa waxaa uu durbadiiba Muqdisho uu ka abaabulay shirar lagu sii dhawacyo Rooble. Dad badan ayaa rumeysan in RW Rooble ay godkiisa biyo ugu galeen, fursada kaliya ee uu haystaana ay tahay in uu meel mariyo dacwada Ikraam Tahliin , taas oo si dadaban u salfan doonto Fahad Yasin iyo saaxiibadiisa..
Dhanka kale, Waxaa weli socda dadaalada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya Madaxweynaha muddo xilleedkiisu dhamaaday ee Farmaajo iyo Ra’isul Wasaare RW Rooble. Dadaalada waan waanta ee laga dhex wado Farmaajo iyo Rooble ayaa xalay waji cusub galay, iyadoo dadaaladaas ay hoggaaminayaan Madaxweyne Qoorqoor iyo Guddoomiye Mursal.
Madaxweyne Qoorqoor oo ay wehliyaan Wasiirka Waxbarashada C/llaahi Carab iyo Wasiir Kuxigeenka Warfaafinta Al Cadaala oo la kulmay Madaxweyne Farmaajo, iyagoo qodobada waan waanta ee ay isla soo gaareen ula tageen, sidoo kalena kulankaas uu hordhac u yahay in la isku keeno Farmaajo iyo Rooble. Ilo ku dhow dadka waanwaanta wada ayaa sheegay in meel wanaagsan wax marayaan, kulamadoodiina ay horumar ka sameeyeen oo ay soo gaarsiiyeen heer labada dhinac isku soo dhowaadeen.